AMBANIVOHITRY DIDY : Hifantoka amin’ny fanabeazana sy rano fisotro madio ny Ben’ny tanàna
Tsy ho nofinofy fa tena hotanterahina mihitsy ny fanapariahana ny rano fisotro madio, ka fokontany miisa enina ao anatin’ny Kaominina Didy no hisitraka izany. 6 octobre 2016
Izany no nambaran’ny Ben’ny tanàna Radoka Davidson raha niresaka indrindra ny seham-pampandrosoana any an-toerana ny tenany.
Efa hita ny loharano izay ahafahana mamatsy izany, hoy izy, ary efa fantatra ihany koa fa hidina tsy ho ela any an-toerana hitsirika izany ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny hijery ny fomba hanatanterahana ny fanamboarana azy io.
Zava-dehibe loatra ny fahazoan’ny mponina rano fisotro madio satria sady antoky
ny fahasalamana no hampihena ny fahasahiranan’ny mponina amin’ny fantsakana rano. Efa mandeha ihany koa ny fanamboarana ny fotodrafitr’asam-pampianarana izay ezaky ny fokonolona sy ny Kaominina ary tohanan’ny faritra, hoy ihany ny Ben’ny tanànan’i Didy Radoka Davidson.
Efa tafatsangana koa ny C.E.G ao amin’ny Fokontany Antsevabe sy Amboarabe izay iraisan’ireo zana-bohitra sy Fokontany mifanolo-bodirindrina amin’izao fotoana izao. Noho ny tsy fahampian’ny efitrano fianarana anefa dia nanapa-kevitra ny vahoaka fa hanangana efitra hafa vaovao ho fanampiny izay efa voahady ny fototra.
Hanomboka amin’ny fananganana azy io izy ireo amin’izao fotoana izao, hoy ny Ben’ny tanàna. Ho afa-pahasahiranana tanteraka ny ray aman-drenin’ny mpianatra sy ny mpanabe rehefa vita io, hoy ihany izy. “Fanamby efa napetrakay tany amin’ny fampielezan-kevitra ary nohamafisinay taorian’ny fahalaniana, ny hijery manokana ny Fokontany sy ireo zana-bohitra rehetra mandrafitra ny Kaominina Didy ary efa mandeha izany amin’izao fotoana izao”, hoy Radoka Davidson. Mbola ezaka iarahan’ny vahoaka sy ny mpitondra ao an-toerana ihany koa anefa ny fanajariana ny lakan-drano rehetra izay hoentina manatsara ny voka-bary izay fototry ny toekarenan’ny Kaominina ambanivohitry Didy iny. Marihina fa manana velaran-tanim-bary midadasika tokoa ny ao Didy ary isan’ny mitàna ny laharana voalohany amin’ny famokarana rah any ao amin’ny ilany atsinanan’ Ambatondrazaka ao.